ဟင်္သာတို့၏ ဗိမာန်နန်းက ခံစစ်ကျောက်ဆောင်တစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – Myanmar National League
“ကျွန်တော် ကစားနိုင်သရွှေ့ ဆက်ပြီး ကစားနေချင်ပါသေးတယ်”
စီနီယာလက်တွဲဖော် ကစားသမားအများစု အနားယူသွားခဲ့ပေမယ့် ဘောလုံးလောကကို ဘဝတစ်ခုအဖြစ် ဖက်တွယ်နေဆဲ…နှလုံးသွေးထဲမှာ ဘောလုံးသွေးတွေ အားမာန်အပြည့် ဆက်လက်စီးဝင်နေဆဲ ကစားသမားတစ်ဦးရှိပါတယ်။ ဒီကစားသမားက လက်ရွေးစင်ဟောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ရွှေလှိုင်ဝင်းပါ။ သူက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကိုယ်စားပြု ဟံသာဝတီအသင်းနဲ့အတူ အောင်မြင်တဲ့ရာသီတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ၎င်းကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မေးခွန်းတချို့ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့….
ဒီနှစ်က ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်။
ဖြေ= ဟုတ် မင်္ဂလာပါအစ်ကို။
မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ အောင်မြင်တဲ့နှစ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ စီနီယာတွေရော လူငယ်တွေရော ကြိုးစားကစားခဲ့ကြတယ်။ တစ်ဦးရဲ့ အမှားကို တစ်ဦးက ဖေးမကူညီ လက်တွဲကစားခဲ့ကြတယ်။ အားလုံးတက်ညီလက်ညီ ရှိခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။
မေး= နည်းပြချုပ်ရဲ့ ဦးဆောင်မှု အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲ။
ဖြေ=ကိုမျိုးမင်းထွန်းက ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ်ပေါ့။ လူငယ်တွေကိုလည်း နေရာပေးတယ်။ ပထမဆုံးရောက်တဲ့နှစ်မှာပဲ ချန်ပီယံဆုကို စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်းအဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ အသင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကိုလည် အောင်မြင်အောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဆင့် ၁၊ ၂၊ ၃ အတွင်း ဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ သူနဲ့ လက်တွဲခွင့်ရတာ ကျေနပ်စရာပါ။
မေး= ဟုတ်ပါပြီ။ လက်ရှိ အသင်းနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကရော…?
မေး= ဒါဆို အသင်းဘက်ကရော ထပ်မံကမ်းလှမ်းတာမျိုးတွေ ရှိပြီလား…။ လာမယ့်နှစ်က AFC Cup မှာလည်း ဝင်ပြိုင်ရမှာဆိုတော့လေ။
ဖြေ= ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ ကမ်းလှမ်းတာမျိုး မရှိသေးဘူးဗျ။ ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ အသင်းတွေရဲ့ ပြင်ဆင်မှုကလည်း မရှိသေးဘူး။ နောက်ရာသီကလည်း လိုသေးတယ်ဆိုတော့လေ။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မေး= လက်ရှိအချိန်အထိ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရနေသေးတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကရော ဘာများဖြစ်မလဲ…
ဖြေ= ပြိုင်ပွဲတွေ မရှိလည်း ကျွန်တော်က လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်တယ်။ အစားအသောက်ကိုလည်း ဆင်ခြင်ရတာပေါ့။ အဓိက ဘောလုံးကစားချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့်ပါပဲ။ လျှို့ဝှက်ချက်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး= သူငယ်ချင်းတွေအများစုက အနားယူကုန်ကြပြီနော်။ အနာဂတ်အတွက်ရော ဘယ်လို ပြင်ဆင်ထားလဲ။ နည်းပြလုပ်ဖို့ရော စိတ်ကူးရှိလား ပြောပြပါဦး။
ဖြေ= မှန်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ အများစုက ဘောလုံးလောကနေ အနားယူသွားကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘောလုံးကစားလာတာ။ အခုလည်းဆက်ပြီး ဘောလုံးကစားချင်သေးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီအသင်းမှာပဲ ဆက်ပြီး ကစားချင်သေးတယ်။ နည်းပြလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိပေမယ့် ကျွန်တော်ကစားနိုင်သရွှေ့ ဆက်ပြီး ကစားသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
မေး= ဒီရာသီပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်တာ တွေ့ရပေမယ့် အမှားတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲတွေလည်း ရှိတယ်နော်။ ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ခဲ့လဲ။
ဖြေ= ကျွန်တော် ပွဲဟိုင်းလိုက်တွေကို ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဗျ။ ဆရာတွေကလည်း remind ပြန်လုပ်ပေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အမြဲတမ်း ပြင်ဆင်နေရတာပေါ့ အစ်ကိုရာ။
မေး= ဟံသာဝတီယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေအတွက်ရော စကားလက်ဆောင်ပြောခဲ့ပါဦး။
ဖြေ= ပရိသတ်တွေက ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် မလျော့တဲ့စိတ်နဲ့ အားပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကွင်းစဉ်တိုင်း တာဝန်ကျေကျေ လာရောက်အားပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ သူတို့လည်း အားပေးခွင့် မရတော့ဘူး။ အဲဒီအတွက်တော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ အသင်းရဲ့ ရလဒ်အတွက်တော့ ကျေနပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မေး= တခြားရော ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင် ပြောပေးပါဦး။
ဖြေ= အသင်းက ဒီရာသီမှာ ထောက်ပံ့မှု ကောင်းကောင်း လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီရာသီတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကလည်း ကစားသမားတွေအပေါ် ထောက်ပံ့မှုှရှိခဲ့တယ်။ အခုလည်း ဒုတိယဆုရတဲ့ ဆုကြေးကို အသင်းသားတွေကို ခွဲဝေပေးသွားမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ကံအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲ ချန်ပီယံဆုနဲ့ လွဲခဲ့ရတယ်။ နောက်နှစ်မှာလည်း ချန်ပီယံ စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိအောင် ဆက်ပြီး ကြိုးစားသွားမှာပါ။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးဇာတိ ဖြစ်တဲ့ ရွှေလှိုင်းဝင်း အနေနဲ့ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ခေတ်ဦးဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ ရာသီတွေမှာ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ကစားခဲ့ပြီး ဇေယျာရွှေမြေ၊ နေပြည်တော်၊ ဧရာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းတွေမှာလည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုများအဖြစ် ဧရာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အတူ ၂၀၁၄ ရှုံးထွက်ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့သလို နေပြည်တော်အသင်းရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးရာသီတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ရမယ့် ၂၀၁၃ ရာသီမှာလည်း အသင်းသားတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးပါ။
ဒါ့အပြင် ဘောလုံးသမားတိုင်းရဲ့ အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ လက်ရွေးစင်အိမ်မက်ကိုလည်း ပုံဖော်ခွင့် ရခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ အင်ဒိုနီးရှားဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာ ကြေးတံဆိပ်ရယူနိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။